रवि लामिछानेसँग डेट जान चाहान्छु – अभिनेत्री कुशुम राउत… – Tufan Media News
रवि लामिछानेसँग डेट जान चाहान्छु – अभिनेत्री कुशुम राउत…
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १४:०७
काठ्माडौं, फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’की अभिनेत्री हुन् कुशुम राउत । आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मबाट कुशुमले अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन् । देशप्रेम र प्रेमकथामा निर्माण भएको फिल्म उनी भने अभिनेता साहिल श्रेष्ठको जोडी बनेकी छन् ।
अभिनेता सरोज खनालले सञ्चालनमा ल्याएको एकेडेमी माला आर्टमा अभिनय प्रशिक्षण लिइरहेकी कुशुम नृत्य र द्वन्द्वको प्रशिक्षणसहित अभिनयमा होमिएकी हुन् ।पुतलीसडक धोवीधार निवासी कुशुमले कलाकारितमा शिखर चुम्ने सपना देखेकी छन् । कुशुम सानैदेखिको रहर पूरा गर्न कलाकारितामा होमिएकी हुन् । यो क्षेत्रमा जस्तै उतारचढाप आए पनि नभाग्ने सोचमा रहेकी कुशुमलाई यस्तो छ, रातोपाटीका दस प्रश्न ।
फिल्मको अफर कसरी आयो ? फिल्मको प्रोडक्सन मेनेजर गणेश सापकोटासँग पहिलेदेखि नै चिनजान थियो । भेटमा उहाँलाई मैले आफ्नो फिल्म अभिनय चाहना राख्ने गर्दथेँ । त्यसका लागि आफ्नो कोसिस र मिहिनेतसमेत बताएको थिए । तिमीलाई सुहाउँदो फिल्म पाए भन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । यो फिल्मको अफर उहाँले नै ल्याउनुभयो । फिल्मका लागि निर्माण युनिटले आयोजना गरेको अडिसन पास भएर फिल्ममा अटाए ।
अभिनयको पहिलो अनुभव कस्तो रह्यो ?सोचेको भन्दा राम्रो गर्न पाए । निकै डर थियो । सिनियर कलाकारसँग काम गर्न सक्दिन कि भन्ने । फिल्ममा भुवन केसी सरदेखि धेरै सिनियर कलाकार हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरुसँग काम गर्न पाउँदा धेरै कुरो सिक्न पाएँ । उहाँले सिकाउनु पनि भयो । सजिलैसँग फिल्म पूरा भयो ।
पहिलो फिल्म रिलिजमा आउँदा कस्तो अनुभूति हँुदोरहेछ ? मेरो अभिनयलाई दर्शकले के भन्ने हुन् भनेर एक किसिमको डर, नर्भस फिल भइरहेको छ । अर्काे कुरो पहिलो पटक पर्दामा आफूलाई देख्न पाउँदा एक्साइटेड पनि छु । अभिनयमा मैले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिने कोसिस गरेकी छु । रिजल्ट पनि राम्रो आउने आस छ ।
कस्तो भूमिकामा देख्न सकिन्छ ?गाउँले केटीको भूमिका निर्वाह गरेकी छु । फिल्मको सुरुदेखि अत्यसम्म मेरो भूमिका त छैन । छोटो भए पनि दर्शकको नजरमा पर्ने खालको छ ।
( यो सामाग्री रातो पाटी डटकमका लागी कुबेर गिरीले तयार पार्नुभयको हो)